Dr. Jay Egger - Colorado Kulliyadaha Hore
Dr. Jay Egger
Dr. Jay Egger waa Madaxa Iskuulka Kuliyadaha Hore ee Colorado — Inverness. Mid ka mid ah waxyaabaha asaasiga ah ee Jay aaminsan yahay waa: arday kasta arrimihiisa. Jay wuxuu rumeysan yahay in waxbarashadu ay mas'uul ka tahay u hibeynta kheyraad kasta sahminta ardayda, ku guuleysiga iyo koritaanka, labadaba tacliin ahaan iyo shaqsi ahaanba. Wuxuu ogyahay in hay'adaha tacliinta ay waajib ku tahay inay si adag uga go'an tahay inay ardayda u diyaariyaan inay galaan kalsooni isku kalsoon oo weligood isbedelaysa, adduun adag leh - iyagoo bartay xirfadaha loo baahan yahay inay wax ku biiriyaan bulshadooda.
Dr. Egger 23-kii sano ee tacliinta, khibrada ardayga — sida bare jaamacadeed hore iyo gudoomiye waaxeed, milkiile ganacsi, agaasime fulineed oo aan macaash doon ahayn, tababaraha isboortiga dugsiga sare, iyo halyeey-ayaa u diyaariyey hay'adda. ballanqaadka lagama maarmaanka u ah dhismaha iyo joogtaynta fursadaha ay ardaydu ku farxi karaan oo ay la tartami karaan. Khibraddiisa waxay sii sii diyaarisay inuu ardayda siiyo fursad ay ku heli karaan sinnaan xagga agabyada waxbarashada ah, taageeridda macallimiinta iyo shaqaalaha ku hawlan, dhisidda iyo joogteynta xiriirada macnaha leh ee ardayda, qoysaska, macallimiinta, iyo bulshada, iyo inay siiso dhaqan aamin ah oo loo wada dhan yahay oo labadaba ku lug leh oo firfircoon.
Xadgudubyada CEC, Maamulka CECI